The Best Seafood In Yangon by popolay.com
09 Jul 2018 24,490 Views
ရန်ကုန်မြို့တွင်းက seafood ဆိုင်များ
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ Seafood အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ရတဲ့ ဆိုင်တွေကို လက်လှမ်းမှီသလောက် စုစည်းပေးလိုက်ရပါတယ် ။
Seafood ဆိုင်ဆိုပေမယ့် မနက်စာ မြန်မာမုန့်လေးတွေလဲ ရတဲ့ ဆိုင်တဆိုင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်.။ မြန်မာမုန့်တွေကတော့ မနက် ၆ နာရီ ကနေ ၁၀:၃၀ ထိပဲ ရနိုင်တာပါ။ စျေးကြီးတဲ့ King Crab တွေလဲ ရနိုင်ပါတယ် ။ Seafood အစုံပါတဲ့ ၁အိုးကို မြန်မာငွေ ၁၈၀၀၀ ပဲကျသင့်မှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ ့လည် 12 လောက်ဆိုရင်တော့ Seafood တွေ အစုံရနိုင်ပါပြီ ။ ဆိုင်ရဲ့ ့Menu တွေမှာ Seafood ပွဲကြီးတွေက တစ်ဝက် / ဟင်းပွဲအရွက်Seafood ပွဲသေးတွေရောအစုံရနိုင်ပါ တယ် ..
ဆိုင်လိပ်စာက - 09260800500 / အမှတ် ၄၇ / ခ , ရှင်စောပုလမ်းမပေါ် ..စမ်းချောင်းမြို ့နယ်မှာရှိပါတယ် ။
ရှင်စောပုလမ်းက ကားတွေလည်းရှင်းတော့ ကားပါကင် အဆင်ပြေပါတယ် ။
Although it’s seafood restaurant , we can also get Myanmar Traditional Food from 6am to 10:30am .
We can also have expensive King Crab . At 12pm we can get seafood set and it is only 18000 MMK per set .
Half of seafood set and vegetable seafood can be ordered in menu.
47 (B) Shin Saw Pu Road,Saungchaung (2.43 mi)Yangon .09 260 800 500
Min Lan Seafood
Seafood ဆိုတာနဲ့ မင်းလမ်းမုန့်တီနဲ့ seafood ကိုချန်ထားခဲ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော် ။ ဆိုင်ဖွင့်တာလဲ နှစ်ပေါင်းကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရန်ကုန်က လူတိုင်းသိကြပါတယ် ။ မုန့်တီကော seafood အင်္စုရနိုင်တဲ့ ဒီဆိုင်လေးမှာ Menu အသီးသီးကို စိ်တ်ကြိုက်မှာစားနိုင်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းကလည်း အမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်။ ဆိုင်ခွဲတွေလည်း အများကြီး ရှိတော့ ကားတွေပိတ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ သွားရလွယ်ကူတာပေါ့နော် ။
ဆိုင် (၅) အမှတ် (၆၉)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ အောင်ရတနာမီးပွိုင့်အနီး၊ စက်မှုဇုန် (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 09969910408, 09261451439
ဆိုင် (၄) အင်းယားကန်ပန်းခြံ (အင်းယားလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ တံတားဖြူမှတ်တိုင်)၊ ကမာရွတ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 099969910409, 0973118696
ဆိုင် (၃) အမှတ် ၇၇ (ဂ) ၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ မြေနီကုန်းစီးတီးမတ်အနီး၊ ဝင်ဆာဂါးဒင်းအိမ်ရာ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 09 9969910406, 0943125152
ဆိုင် (၂) အမှတ် (၁၆)၊ ပါရမီလမ်းနှင့် အနောက်မေခလမ်းထောင့်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 09969910407, 0973036990
ဆိုင် (၁) အမှတ် (၁)၊ မင်းလမ်း၊ ဆရာစံ (တောင်) စံပြရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ 09263698622
Min Lan moteti seafood is also popular .It has opened for many years in yangon and everyone knows it .You can have not only moteti but also seafood in menu . It has different kind of price .You don’t have to worry about traffic because they have branches.
Fish & Co Myanmar
ပင်လယ်စာကိုရှုးရှဲလေးကော ။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးကော ။ စင်ကာပူအရသာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားနိုင်မယ့် Fish and Co
အရသာအသစ်အဆန်းတွေ ရရှိနိုင်တဲ့ အပြင် မွေးနေ့ပွဲတွေလဲ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ဆိုင်ကို အပေါ်ထပ်အောက်ထပ် ခွဲထားပြီးHigh-Classဆန််ပြီး ငါးဖမ်းစက်လှေကြီးပေါ်မှာ လာစားသလို Feelingနဲ့ ငါးဖမ်းစက်လှေပေါ်က ပစ္စည်းတွေနဲ့ပါ Selfieဆွဲရင်း #Lunchကောင်းကောင်း ဖန်တီးနိုင်မယ်.....နိုင်ငံ၅ နိုင်ငံဆိုင်ခွဲတွေ ရှိတဲ့ ဆိုင်လေး ပါ
Seafood Lover တွေအကြိုက် ပင်လယ်စာတွေကို European Style ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးထားပြီး ..seafood အပြင် Pizza မျိုးစုံလဲ ရနိုင်ပါသေးတယ် ။
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက် ၁၁:၀၀ မှ ည ၁၁:၀၀ အထိဖြစ်ပြီး အေဒီ မီးပွိုင့်အနီး ပါရမီလမ်း၊ ရန်ကုန် မှာရှိပါတယ် ။
09967750926, 019666415 ။
You can have Hot and Spicy seafood,sweet and fresh seafood in Fish and Co Myanmar. You can taste different kinds of special flavour and you can also hold birthday party.It isahogh class two-storey giant fishing boat like restaurant and you can also selfie with beautiful background.They opened many branches in5countries.For seafood lover,you can get European Style seafood and also different kinds of pizza.It opens from 11am to 11pm and locates near AD point. 09967750926, 019666415 ။
King Crab တွေနဲ့ Seafood အစုံရတဲ့ နောက်တဆိုင်ကတော့ Seafood Paragon ပါပဲ ။ Seafood Paragon ရဲ့့ Big ဗန်း ကတော့ နာမည် အကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်။ စျေးကလည်း ၃၅၀၀၀ ဆိုတော့ စားရတာ မဆိုးဘူး တန်လဲ တန်တာပေါ့နော် ။ အပေါ်အောက်နှစ်ထပ် ရှိပြီး လေတဖြူးဖြူး နဲ့ ဆွဲချင်ရင်တော့ အပေါ်ထပ်လေးက အဆင်ပြောတာပေါ့နော် ။ အခြားseafood တွေကတော့ စျေးနှုန်း အမျိုးမျိုးပေါ့နော် ။
အမှတ် ၃၁ က အောင်ဇေယျလမ်း ရန်ကင်း မှာရှိပါတယ် ။
Another restaurant for King Crab and many Seafood is Seafood Paragon. The Big Ban of Seafood Paragon is popular. The price is only 35000 MMK so it is convenient. It­ is two-storey and u can get fresh air in first floor. Different kind of seafood have different price. 09-798-668-445
Novotel Yangon Max ( Seafood Buffel )
Seafood ကိုစားရတာ မဝဘူး အဝစားချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်လည်း Seafood Buffel ရနိုင်တဲ့ နေရာလေးတွေကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ် ။ ကြယ်ငါးပွင့် ဟော်တယ် ကြီးမှာ seafood စားရမယ်ဆိုတော့ အရမ်းအရမ်းမိုက်နေပြီပေါ့နော် ။ seafood အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ကို ခင်းကျင်းထားတာလဲ လုံးဝ ပွဲတော်ကြီးပေါ့နော် ။ Seafood အပြင် အခြား အသား ၊ အရွက်တွေလည်း ရှိသေးတော့ အရမ်းမိုက်တာပေါ့ ။
Sunday Brunch ကတယောက်ကို $39 ကလေးဆို ၆ နှစ်ကနေ ၁၂ နှစ်ဆို တဝက် ၆ နှစ်အောက်က free ပါ ရေကူးတာပါ ပါပြီးသားဆိုတော့ အရမ်းတန်ပါတယ် ။ဖုန်း နံပါတ်လေး ကတော့ 09-251185989 ဖြစ်ပါတယ် ။
If you are unsatisfied with seafood, there is another restaurant for Seafood Buffel. It is also in5stars hotel. You can have many kind of seafood and also meat and vegetables. For Sunday Brunch, 39 dollar for each person,half price for6to 12 years old children and free for under 6.There is also pool. 09-251185989
ရန်ကုန် မြို့တွင်းမှာ ရှိတဲ့ Seafood Buffet နောက်ထပ် တနေရာကတော့ Seafood ချစ်သူတို့အတွက် Sule Shangri-la, Yangon ရဲ့ Fisherman's Feast Buffet တဲ့ တန်လည်းတန် စုံလည်းစုံ အသားတွေ ပုစွန်၊ ဂုံး၊ ဂဏန်းတွေကလည်း တကယ်ကို လတ်ဆတ်ဆတ် ကြိုက်တဲ့ သူတွေ အကိုက်ပဲနော် ။ ဘူးဖေးစား အပြီးမှာ ကော်ဖီ ဒါမှမဟုတ် လက်ဖက်ရည်လည်း သောက်လို့ရသေးတယ် တစ်ယောက်ကို ၃၆ ဒေါ်လာ ကျသင့်တယ်လို့လဲ သိရပါတယ် ။ 01 242 828 extension ( 6421 or 6422)
Another restaurant that can serve Seafood Buffet is Sule Shangri-la. And You can also have fresh meat, prawn and crab. You can have coffee after Buffet and it costs only 36 dollar per person. 01 242 828
နာမည်ကြိးနေတဲ့ Seafood Buffet နောက်တနေရာကတော့ Malia Hotal Yangon ပါပဲ ။ အချက်အချာ ကျတဲ့ အင်းယားကန် အရှေ့မှာ ရှိပြီး Myanmar Plaza နဲ့ နိးပြီး သွားရလာရလွယ်ကူပါတယ် ။ သူကတော့ သောကြာ နေ့တိုင်း ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ကို ၄၈ ဒေါ်လာ ကျသင့်မှာလဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ 48$ နဲ့ ဝိုင်ပါ ပါသေးတယ်နော် ။ အချိုပွဲကတော့ ပြောမနေတော့ ပါဘူး အမိုက်စားတွေပဲပေါ့ ။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀၁-၉၃၄၅၀၀၀ သိို ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Another famous Seafood Buffet Restaurant is Malia Hotel. It locates in front of Inya Lake and near Myanmar Plarza. It opens every Friday and 48 dollar for each person. With 48 dollar, you can also taste great wine. And desserts are all special ones. 01-9345000
ကြယ်​ငါးပွင်​့အဆင်​့ရှိတဲ့ Sedona Hotel(Yangon) မှာLunch Buffet ကလည်း မပါမဖြစ်ပေါ့နော် ။
Seafood တခုထဲမဟုတ်ပဲ International Buffet စားရတာဆိုတော့ အရမ်းမိုက်လို့ စားဘူးသူတိုင်း good review ပါ ။ Seafood​တွေလည်း စုံတယ် ပုဇွန်​​၊ ဂုံး ၊ ကမာ ၊ ဂဏန်​း ၊ ရေဘဝဲတို့​ ​ဆော်​လမွန်​ငါးတို့ တူနားငါးတို့လည်​းရနိူင်ပါတယ် ။ အပူ​ရော အ​အေး​ရောအစုံဘဲ Free flowမို့လို့ Beer ၊ Wine ၊ Juice ၊ Coke ၊ Sprite ၊ Sunkists ၊ Sparkling Wine တွေအမုန်​း​သောက်​လို့ရပါတယ်​ ။
စ​နေ ၊ တနင်္ဂ​နွေ Lunch Buffet လာစားတဲ့လူတိုင်​းဟာမနက်​11နာရီခွဲက​နေ ည7နာရီထိ Sedona Hotel Swimming Pool မှာ​ရေကြိုက်​သ​လောက်​အမုန်​းကူးလို့ရတယ်​Buffet Timeကလည်​းမနက်​11နာရီခွဲက​နေ ​မွန်​းလဲ3နာရီအထိဆို​တော့ ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေးစား​သောက်​လို့ရတယ်​အေး​အေး​ဆေး​ဆေးစား​သောက်​ပြီးမှ​ရေဆင်​းကူး
​ Saturday and Sunday ဘဲInternational buffet ရှိတာ ပါတစ​်​​ယောက်​ကိုအပြီးအစီးအ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ 33$ကျမယ် ။ ​Monday to Friday တစ​်​​ယောက်​ကိုအပြီးအစီး အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ 25$​လောက်​ကျပါတယ် ။ ​ သွားစားမယ်​ဆိုရင်​ Bookingတင်​ပြီးသွားစားတာအ​ကောင်​းဆုံးပါ
Broတို့က​တော့ Pool Sideမှာစားခဲ့တယ်​
Bookingတင်​မယ်​ဆိုရင်​ 01-860 5377ကိုဘိုကင်တင်​ပြီးစားသုံးနိုင်​ပါတယ်​
Five Star Sedona Hotel is also famous for its International Buffet and it also have good review for seafood lover. It serves different kinds of seafood and you can drink all kind of juice for free. In Saturday and Sunday, the customers can swim at Sedona Hotel Swimming Pool from 11am to 7pm.
Buffet time is from 11am to3pm so you can swim even after having buffet.
International Buffet is only on Saturday and Sunday and it costs 33 dollar per customer. For Monday to Friday , it is only 25 dollar per customer. If you are interested in going, it is better with pre-booking. Because there are many customers, it is not sure you can have in your favourite place.
Ocean Pride Thia Seafood Restaurant
Seafood လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားလို့ရနိုင်မယ့် နောက်တဆိုင်ကတော့ Ocean Pride Thai Seafood Restaurant ပါ ။ ကန်ထဲမှာ မွေးထားတာကို စားခါနီးမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ချက်ပေးတာ ဖြစ်ပြီး စျေးနူန်းကိုတော့ kg နဲ့ရှင်းရတာပါ ။ Kg နဲ ့ချိန်ပြီး စားလို ့ရတဲ့ အထဲမှာ ကျောက်ငါး / ကင်းပုဇွန် / ချောင်းဂဏန်း / ရေချို ပုဇွန် / ငါးရံ့/ ပန်းဂဏန်း နှင့် Lobster တွေလို Seafood တွေ ရနိုင်ပါတယ်စျေးနူန်းတွေကလည်း အစားအစားပါပဲ ။
Seafood အစုံကင် - 35000 ကျပ်ပဲ ပေးရတဲ့ အစုံကင်လေးလဲ အရမ်းကို မိုက်ပါတယ် ( အထပ် ၃ ခုပါပြီး ... ရေချိုပုဇွန် ၊ ပန်းဂဏန်း ၊ သွေးဂုံ ၊ ကကတစ်ငါး ၊ ဂုံးချော ၊ white ပုဇွန် ၊ ကင်းမွန် ၊ နန္ဒာလိူင် ခရူ်တွေ စုံနေအောင် ပါပါတယ် ။
09443993772 / No 20 , သုခ ဝတီလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို ့နယ်ပါ ။ ကန်ဘဲ့လမ်းဘက်ကနေ သွားမယ်ဆိုရင်
ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံမရောက်ခင် သုခဝတီလမ်း ညာဘက် ချိုးရင်ရောက်ပါပြီ ။ MIC အနီး မှာပါ
Another famous seafood restaurant id Ocean Pride Thai Seafood Restaurant. You can choose what you want to eat before having so it is fresh. You have to pay according to kg. You can different kind of fresh seafood in there . A set of seafood is 35000 MMK . 09443993772
Most Popular of Food